Safiirka Shiinaha oo gaaray Magalada Hargeysa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Safiirka Shiinaha oo gaaray Magalada Hargeysa
Safiirka Shiinaha oo gaaray Magalada Hargeysa
Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa Maanta oo sabti ah waxaa gaaray Safiirka dowladda Shiinaha u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya ee Qin Jian iyo wafdi uu hoggaaminayay.
Ilo diblomaasiyaddeed oo xog-ogaal ah ayaa xaqiijiyay in Danjire Qin lagu soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Hargeysan, isla markaana loo galbiyay dhinaca Xarunta Madaxtooyadda.
Sidoo kale Safiirka ayaa inta uu ku sugan halkaas waxaa uu kulan la qaadan doonaa Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, isagoo la xusay inuu kala hadli doono Arrimo kala duwan oo dhinaca diblomaasiyadd ah.
Socdaalka safiirka Shiinaha ee Soomaaliya uu ku tegay Magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu ku soo beegmayaa, iyadoo dhawaan ay xiriir cusub wada bilaabeen Somaliland iyo Dalka Taiwan ee ku yaalla Waqooyiga qaaradda Aasiya.
Dowladda Shiinaha ayaa siweyn uga soo horjeeda xiriirka ay horey uga wada saxiixdeen Somaliland iyo Taiwan, isla markaana heshiis uu yahay mid ku saleeysan dhinacyo kala duwan, iyagoona shaaciyay in xiriirka la adkeyn doono.
Previous articleDFS oo warkasoo saartay furida duulimaadka caalamiga ee dalka
Next articleDowlada Ethiopia oo xabsi guri galisay Gudoomiyaha OLF